श्री मौन, Interbad 2018 मा सबैभन्दा अभिनव पूल गर्मी पम्प - Aquark इलेक्ट्रिक लिमिटेड
श्री मौन, Interbad 2018 मा सबैभन्दा अभिनव पूल गर्मी पम्प
यो श्टुटगार्ट, जर्मनी मा Interbad धाउन हाम्रो पहिलो पटक हो। हाम्रो बूथ भ्रमण गर्न आफ्नो समय धन्यवाद। यसलाई साझा र ग्राहकहरु संग पलटनेवाला पूल गर्मी पंप बारेमा विचार र अनुभव आदान प्रदान गर्न ठूलो अवसर हो। श्री मौन - हामी हाम्रो अद्वितीय स्लैब डिजाइन पलटनेवाला आफ्नो रुचिको लागि सबैभन्दा कृतज्ञ छौं।
श्री मौन सम्पूर्ण प्रदर्शनी सबैभन्दा नवीन पूल गर्मी पम्प छ। यो राम्रो शो मा विभिन्न देशका ग्राहकहरु द्वारा पहिचान गरिएको छ। धेरै आदेश निकै हामीलाई प्रोत्साहन गरेको छ जो ठाँउ हो, मा पुष्टि गरिएको छ।
श्री मौन किन सबैभन्दा नवीन उत्पादन हो?
हाम्रो औद्योगिक डिजाइनर धन्यवाद। यो हाम्रो ग्राहकहरु र उपभोक्ताहरु को लागि मूल्य सिर्जना गर्न चाहने एक भावुक टोली छ। सरल क्लासिक स्पर्श नियन्त्रक, बगैचा अनुकूल समतल सतह डिजाइन ... हरेक विवरण बस एउटा कारण लागि गर्दछ: ग्राहक अनुभव सबै भन्दा राम्रो बनाउन। लगातार अनुकूलन र नयाँ प्रयास पछि, सफलतापूर्वक परम्परागत पलटनेवाला पूल गर्मी पंप को STEREOTYPES परिवर्तन जो अन्तमा यो सबै भन्दा नवीन उत्पादन जन्म भएको थियो।
यसबाहेक, हामी सफलतापूर्वक शो समयमा जर्मनी मा विशेष साझेदार निश्चित छ। त्यो स्थानीय व्यापारीहरु र पूल दोकान मालिक अर्थ जर्मनी मा सिधै श्री मौन खरीद गर्न सक्नुहुन्छ! तपाईं श्री मौन रुचि हो तर Interbad हामीलाई पूरा गर्न सकेन भने, हाम्रो अर्को शो, लियोन, फ्रान्स Piscine ग्लोबल युरोप 2018 सम्झना छैन बाहिर। आउनुहोस् र हामीलाई कुरा अनुहार सामना, तपाईं श्री मौन र हाम्रो पलटनेवाला परिवारको बारेमा थप जान्न हुनेछ।
का सँगै इन्वर्टर मौका समातेर गरौं, लियोन मा बूथ 5D126 तपाईं हेर्न!
पोस्ट समय: अक्टोबर-31-2018